घट्ना भएको ३ दिन पछि प्रहरीले बल्ल गर्यो यस्तो आशंका | समाचार
घट्ना भएको ३ दिन पछि प्रहरीले बल्ल गर्यो यस्तो आशंका
September 9, 2021 NepstokLeaveaComment on घट्ना भएको ३ दिन पछि प्रहरीले बल्ल गर्यो यस्तो आशंका
संखुवासभाको मादी नगरपालिका–१, खोला गाउँका ६ जनाको घटना रहस्यमयी बन्दै गएको छ। ह’ ‘त्या भएको घटनालाई थप अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) घटनास्थल पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख डिएसपी लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिए।
मादी नगरपालिका–१ उम्लिङ खोलागाउँमा भएको का’ण्डको अनुसन्धानमा तालिमप्राप्त कुकुर र विज्ञटोलीले अहिलेसम्म केही तथ्य फेला पार्ने सकेको छैन। अ’पराध अनुसन्धानका लागि संघीय प्रहरी एकाइ कार्यालय धरानबाट आएको प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भीम दाहाल नेतृत्वको कुकुरसहितको विज्ञ टोली घटनास्थलमा खटिए पनि सुराक पत्ता लगाउन सकेको छैन।
धरानबाट आएको कुकुरसहितको विज्ञ टोली घटनास्थलमा खटिए पनि सुराक पत्ता लगाउन नसकेपछि मंगलबार दिउँसो शव पोस्टमार्टमका लागि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाएको थियो । प्रहरी र स्थानीयको जानकारी अनुसार तेज बहादुरको शव घरदेखि करिब ७० मिटर पर सडकको भित्तामा, पार्वतीको घरैमा सुतिरहेको अवस्थामा, कमला र रञ्जनाको घर नजिकैको खोल्सीमा र दिपेन र गोमाको घरमाथि खरबारीमा शव फेला परेको थियो।
गाउँमा भएको प्रकरणमा प्रहरीले ह’ ‘त्यारा चिनेजानेकै व्यक्ति भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीका अनुसार परिवारका एक सदस्यको ह’ ‘त्यापछि आफ्नो पहिचान खुल्ने डरले अरु सदस्यको पनि ह’ ‘त्या गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार घटनामा सं’लग्न व्यक्ति चिनजानकै भएका कारण कार्की परिवारका ५२ वर्षीय तेजबहादुर कार्कीको ह’ ‘त्यापछि परिवारका अन्य प्रत्यक्षदर्शीको पनि ह’ ‘त्या भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको हो ।
रातो पाटीमा छापिएको समाचार अनुसार यो घटना सोमबार बिहान अथवा आइतबार बेलुका कति बेला भएको हो भन्ने अन्योल रहेको छ। बौद्धमानले भने, ‘सपरिवार बेलुका ६-७ बजेतिर खाना खाएर सुतेका थियौँ। बिहान एक्कासि यस्तो देखियो अचम्मैमा परेँ। घटनामा परेकाहरुको शवको अवस्थालाई हेर्ने हो भने तेज बहादुरले गम्बुट (जुत्ता) र कोट लगाएका छन् भने अन्य ५ जनाले चप्पल, स्यान्डल लगाएका थिए। सो बमोजिमको प्रकृतिलाई हेर्दा घटना कतिबेला भएको हो भनेर सोझै अनुमान गर्नसक्ने स्थितिमा छैन। यो घटनालाई विश्लेषण गर्ने हो भने बेलुका खाना खाएर सुतेकाहरु चप्पल, जुत्ता नलगाएको हुनुपर्ने हो।’
घटना बिहानैको हो भने पनि भा’गदौ’ड गर्दा जुत्ता, चप्पल उनीहरुले कसरी लगाउन भ्याए? ह’ ‘त्या गरिएका ६ जनाको नै टा’उकोमा सामान्य चो’ट र र’ग’त जमिएको पाइएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशन र प्रशारण भएअनुसार ह’तिया’र प्रयोग गरि ह’ ‘त्या गरिएको भनिए पनि त्यस्तो नभएको पाइएको हो। उनीहरुको शव घो’प्टि’एको अवस्थामा रहेको थियो।
घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेका प्रहरीका अनुसार ह’ ‘त्याराले सबैभन्दा पहिले तेजबहादुरलाई आ’क्र’म’ण गरेको हुनसक्ने देखिएको छ । सो दिन बारीमा खेताला बोलाएकाले तेजबहादुर बिहानै घरबाट निस्किएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । तेजबहादुरको गोडामा बुट जुत्ता पनि भेटिएकाले उनी बिहानै कामका लागि निस्किएको हुनसक्ने प्रहरीको भनाइ छ । तेजबहादुरको शव भेटिएको स्थान घरबाट करिब २५० मिटर टाढा रहेको र त्यहाँबाट चि’च्याउँदा घरका मानिसहरुले सुन्न सक्ने देखिन्छ ।
ह’ ‘त्यारा बाटोमा कुरेर बसेको वा खोल्सीमा जम्काभेट हुँदा तेजबहादुरमाथि आ’क्र’म’ण भएको हुनसक्ने प्रहरीले बताएको छ । जब तेजबहादुरमाथि आ’क्र’म’ण भयो, त्यसपछि उनी चि’च्या’एको र चि’च्या’एपछि तेजबहादुरकी श्रीमती कमला र बुहारी रञ्जना दौडिँदै घटनास्थलतर्फ गएको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
तेजबहादुरमाथि आ’क्र’म’ण गरिरहेको अवस्थामा ह’ ‘त्यारालाई तेजबहादुरकी श्रीमती कमला र बुहारी रञ्जनाले देखेपछि उनीहरुलाई पनि आ’क्र’म’ण गरी ह’ ‘त्या गरिएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ । कमला र रञ्जनालाई पनि आ’क्र’म’ण गरेपछि उनीहरु पनि क’राएको र विपिन र गोमाले सुनेपछि उनीहरु पनि त्यतै गएको प्रहरीको अनुमान छ ।
ह’ ‘त्यारालाई विपिन र गोमाले पनि चिनेका कारण उनीहरुलाई पनि ल’खे’टी ल’खे’टी ह’ ‘त्या गरेको हुनसक्ने ‘क्रा’इ’म सि’न’ले बताएको प्रहरीको भनाइ छ । किनभने तेजबहादुरको गोडामा बुट जुत्ता हुनु र अन्यको गोडामा सामान्य चप्पल हुनुले उनीहरु सबै घरभन्दा बाहिर नै भएको अवस्था देखिएको प्रहरीको ठम्याई छ ।
तेजबहादुरकी ८४ वर्षीय आमा पार्वती कार्की भने घरमै कुँडो पकाइरहेकी थिइन् । तर घटनाबारे पार्वतीले पनि थाहा पाएको हुनसक्ने भन्दै उनको पनि घरमै गएर ह’ ‘त्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीले बताएको छ । तर तेजबहादुरका बुवा वौद्धमान कार्की भने कान नसुन्ने र सुतिरहेका कारण घटनाबारे थाहा नपाएको भन्दै ह’ ‘त्याराले उनलाई भने केही नगरेको हुन सक्ने प्रहरीले बताएको छ ।
जीवित रहेका बौद्धमान आफूलाई घटनाको विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्। उनले बिहान घरमा कोही नउठेपछि आफू उठेर घरबाहीर गई को कता गएछन् भनेर खोजी गरे तर कोही पत्ता नलागेपछि उनी पुन आफू सुतेकै ओछ्यानमा फर्किएका थिए। जुनबेला करिब ८ बजिसकेको थियो। ओछ्यानमा पुगेर अर्को खाटमा सुतेकी आफ्नी श्रीमती पार्वतीलाई उठाउन खोजे तर उनी उठिनन् उनले भने।
बौद्धमानले भनेअनुसार पार्वतीलाई मु’र्छा पर्ने पुरानै रोग थियो। निकैबेरपछि पनि पार्वती नउठेपछि बौद्धमानले श्रीमतीको मृत्यु भइसकेको जानकारी पाए। निकैबेरपछि होसमा आउने गरे पनि सोमबार बिहान भने उनी कहिल्यै नउठ्ने गरी गइन्।
परिवारै स’खाप बनाएको घटनापछि मादी–१ उम्लिङ खोला गाउँ शोकमा डु’बेको छ। अहिलेसम्म अ’परा’धी पत्ता नलाग्दा गाउँको अवस्था सामान्य बन्न नसकेको स्थानीय रणबहादुर कार्की बताए। घटना कसरी र किन गरिएको हो भन्ने बारेमा केही पनि नखुलेको उनले बताए। घटनाको वास्तविकता पत्ता नलागेसम्म गाउँ सामान्य अवस्थामा फर्कन नसक्ने स्थानीय कार्कीले बताए।
घटनाले त्रसित बनेका छिमेकी चन्द्रबहादुर थापा घर सरेका छन् । आफन्त समेत रहेका थापा घटनास्थल भन्दा केही दुरीमा रहेको उम्लिङ मावी नजिकै सरेका हुन् । मृतक ५२ वर्षीय कमलाका काका चन्द्रबहादुर भन्छन् ‘बसिसक्नु भएन घर भित्रै पनि मनमा चिसो पस्न थाल्यो त्यही भएर अफैले बनाएको खाली घर थियो अहिले त्यहाँ सरेको छु ।’
५ जनाको परिवार रहेको चन्द्रबहादुरले घटना भएकै घर सरेको बताए ‘घरभित्र आङ फुल्छ, केटाकेटीले पनि अब हामीलाई पनि मा’र्छ भन्दै रुन, कराउन र एकाेरीन थाले छाेराेछाेरीमा गलत मनोविज्ञान नहोस् भनेर पनि सर्नुपर्याे । चन्द्रबहादुरले भने ‘गाउँ आ’ङ्कित भएको छ । गाउलेहरू सबै तर्सिएका डराएका छन् । सधै रात साँझ हिँडेकाे बाटो एक्लै हिँड्न कसैको आँट छैन ।’
अर्का एक छिमेकी नन्द कार्की भन्छन् ‘घटना भएदेखि शरीर कामिरहेको छ । घटनास्थलमा पुगेर घर फर्कँदा घरमा कोही नभएपछि आफ्नै घरभित्र पस्न सकिन । श्रीमती पनि घरबाट भागिछे ।’ ग्रामीण क्षेत्र भनेको समयमा मोबाइलमा टावर समेत नआउने र रात साँझ घाँसदाउरा गर्नुपर्ने भए तापनि घटनापछि घाँस का’ट्नसमेत जान नसकेको स्थानीय एक महिलाले बताइन् ।
उनी भन्छिन् ‘घरहरू अलि पर पर छ । खेतबारीमा रूखहरू छन् । जङ्गलजस्तो छ । घटनापछि घाँस काट्न जाँदा पनि कोही पछाडिबाट पो आयो कि भने जस्तो हुन्छ । आफ्नै खेतबारीमा जान सकेको छैन । छोराछोरीहरू डराएर एक्लै छाड्न सक्ने अवस्था छैन ।’
चन्द्रबहादुर थापाका अनुसार मृतक तेजबहादुरका कान्छा छोरा नरेश दुबईबाट फर्किसकेका छन् । घट्नामा परेका परिवारको दा’हसं’स्कार सुनसरीको इटहरीस्थित बूढी खोलामा गरिएको छ । सोमबार बिहान त्यो अवस्थामा फेला परेका तेजबहादुर कार्कीसहित ६ जनाको इटहरीस्थित बूढीखोला घाटमा अन्त्येष्टि गरिएको मृतक तेजबहादुरका भतिज एमविक्रम कार्कीले जानकारी दिए ।
बुधबार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा शवपरीक्षण भएपछि बूढीखोला घाटमा अन्त्येष्टि गरिएको भतिज एमविक्रमले बताए । शव अन्त्येष्टिका लागि तेजबहादुर कान्छा छोरा रमेश कार्की दुबईबाट मङ्गलबार धरान आएका थिए । अन्त्येष्टिका लागि नेपाल आएका छोराले आफ्नो परिवारको यो अवस्था देख्दा सम्हालिन नै सकेका थिएनन । अन्तिम संस्कारमा उपस्थित भएका आफन्त र सर्वसाधारण पनि नरुने कोहि थिएनन् । मृतककाे घरमा ३ वटा गाई, एक हल गाेरू, १० बटा बाख्रा रहेका छन् । परिवारका एक्ला ९० वर्षीय वयाेवृद्ध मात्र जीवित भएकाले ती चौपाया छिमेकीले रेखदेख गरिरहेका छन् ।
दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि
दुई वर्षमा तीन अर्ब बचत, पेट्रोल र मट्टितेल चाँडै पाइपलाइनबाटै ल्याइने
नेपालमा पाइने तर नेपालीले राम्रोसंग नचिनेको यो अमुल्य औषधि, जस्ले महिनावारी गडबडी, क्यान्सर र अन्य यस्ता ठुला रोग निको पार्छ !
September 6, 2021 Nepstok
बाढीले पुरियो एम्बुलेन्स, बिरामीको मृत्यु, चालक घाइते